Ciidamadda Nabadsugida Somaaliya oo si dayaay labo siyaasi oo maanta la xiray – Radio Daljir
Ciidamadda Nabadsugida Somaaliya oo si dayaay labo siyaasi oo maanta la xiray
Janaayo 27, 2018 2:17 g 0
Ciidamada Nabad Suggida Somaliya ayaa maantadhaw waxa ay sii daayeen Siyaasiga Kamaal Guutaale iyo Sayid Cali Macalin Cabdulle oo labadaba ka wada tirsan Xisbiga Wadajir ee Magaalada Muqdisho,kuwaas oo maanta Muqdisho lagu xiray.
Labadan Shaqsi ayaa laga xiray Hotelka Maka Al-Mukarama oo ay ku sugnaayeen, kadib markii ciidamada ammaanka ay galeen oo ay kala baxeen Hotelkaasi.
C/raxmaan C/Shakuur Warsame ayaa xaqiijiyay in ciidamada NISA ay sii daayeen labadan Siyaasi ee kala ah Gudoomiyaha Xisbiga Wadajir Kamaal Guutaale Iyo Xoghayaha Xibsigaasi.
Lama oga illaa hadda sababta rasmiga ah ee ka dambeysay in ciidamada ammaanka ay xiraan shaqsiyaadkaan iyo sababta haddana keentay in horay laga sii daayo.
dhinaca kale Kamaal Guutaale iyo Sayid Cali Macalin Cabdulle, ayaanan weli la hadlin Warbaahinta.
Agaasimaha Cusub ee Wasaaaradda Waxbarashada Puntland oo Maanta Xilka la Wareegay (dhegayso+Sawiro)